'ရဲဝင်းကာရိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက သိပ်မတူပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆ? - Yangon Media Group
”အဓိပတိလမ်းက နဂ္ဂတစ်များ”ဇာတ်ကားမှာ ရဲဝင်း ကာရိုက်တာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း….။
မေး-”အဓိပတိလမ်းက နဂ္ဂတစ်များ” ဇာတ်ကားနဲ့ပတ် သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-ဒီဇာတ်ကားလေးက ကိုနီကိုရဲ ရေးခဲ့တဲ့ ဝတ္ထု စာအုပ်လေးကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ကိုနီကိုရဲဆိုတာကလည်း အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ကလည်း ညီအစ်ကိုတွေ နှစ်အ ကြာကြီးတွေ့ခဲ့ ကြတယ်။ သူ့စာအုပ်ထဲက အ ကြောင်းအရာတွေကို သူကလည်း ပြောပြတယ်။ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းဖြစ်တယ်။ အဓိက, ကတော့ စာအုပ်ကိုကြိုက်လို့ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကတော့ ကျွန် တော်တို့နဲ့တော့သိပ်မတူပါဘူး။ ကျန်တဲ့ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်တာ နုံအတာတွေကို သရုပ်ဆောင် ရတာကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ ရှေ့မှာလည်း ကို လွင်မိုးတို့လည်း ဒီဇာတ်ကားလေးကိုပဲ ”ကြည်ပြာ ရောင်နဂ္ဂတစ်များ”ဆိုပြီး ရိုက်ခဲ့ဖူးတာတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့က ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
မေး-အရင်ကရိုက်ခဲ့တဲ့”ကြည်ပြာရောင်နဂ္ဂတစ်များ” ဇာတ်ကားနဲ့ဒီဇာတ်ကားက ဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေ ရှိမလဲ။
ဖြေ-ကိုနီကိုရဲရဲ့ဝတ္ထုကိုက ဇာတ်ကားတစ်ကားစာကို မကပါဘူး။ အရင်တုန်းက ဦးမျိုး(ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုး မင်း)တို့ ရိုက်ခဲ့တုန်းကလည်း တချို့ထည့်မရိုက်ဖြစ်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကား လေးက အရင်က ဇာတ်ကားမှာ ကျန်နေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကို သုံးထားတာဖြစ်တာကြောင့် ကိုလွင်မိုးတို့ ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ဇာတ် လမ်းကတော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုလွင်မိုးတို့ ရိုက်ခဲ့တုန်းကတော့ ဇာတ်ကားက အရမ်း လည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ကိုလွင်မိုး နဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ကလည်း အ ရမ်းကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ကို လွင်မိုးလည်း ခန္ဓာကိုယ်သေး သေးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲက ရဲဝင်းရဲ့ကာရိုက်တာကို တော့ ကောင်းကောင်းကြီး ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ကတော့ ကိုလွင်မိုး တို့ ဇာတ်ကားကိုတော့ မီ မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့လည်း တတ်သလောက်တော့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
မေး-တက္ကသိုလ်ကျောင်း သားတွေက အသက်ကြီး တယ်လို့ ဝေဖန်နေကြတာ တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့ရော ဘယ်လိုပြော ချင်လဲ။
ဖြေ-အမှန်အတိုင်းပြောရ ရင်တော့ အသက်ကတော့ ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ် လေးမှာကျတော့ ကျွန်တော်တို့ က ၁ဝ တန်းအောင်ပြီး တက္က သိုလ်ရောက်ခါစတော့ မဟုတ် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဘွဲ့လွန်(Master)တန်းတက်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ၊ နှစ်တွေ ဘာတွေကျထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပရိသတ်တွေဖြည့်တွေးလို့ရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ လည်း ထင်ပါတယ်။
မေး-ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေလျှော့ချထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လည်း ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ-နောက်ထပ်ရိုက်ချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားပုံစံအသစ်လေး တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းလေးတွေက သေချာအချိန်ယူပြင် ဆင်ပြီးမှရိုက်ရမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကလည်း အရမ်းများ နေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ထပ်ထပ်ရိုက်နေရင် ဇာတ်ကားတွေ ကလည်းပိုများလာပြီး ကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျွန် တော်တို့က နောက်ပိုင်းရိုက်မယ့် ဇာတ်ကားလေးတွေကို ဇာတ်လမ်း ပုံစံအသစ်လေးတွေပြောင်းပြီး လမ်းကြောင်းတစ်ခုပြောင်းချင်တာ ကြောင့် ဇာတ်ကားရိုက်တာတွေကို လျှော့ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးကလည်း ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ အပြင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေအနေနဲ့ ရိုက်ကူးမှုတွေဆိုရင်တော့ တော်တော် ကိုနည်းတဲ့အရေအတွက်တွေ ဖြစ်မှာပါ။
မေး-နောက်ပိုင်းဇာတ်ကားတွေကို အချိန်ယူရိုက်ကူးမယ်ဆိုတာ ကရော ဘယ်လိုအချိန်ယူရိုက်ကူးသွားမှာလဲ။
ဖြေ-ဇာတ်လမ်းကို အရင်ရှာရပါတယ်။ ပြီးရင်ဇာတ်ညွှန်းကို အချိန် ယူပြီးရေးသားရပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းပြီးပြီဆိုရင်တောင်”Pre Production ပိုင်းမှာလည်း လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ ”ငရဲဆိုရင် ဂျိုနဲ့လား”ဇာတ်ဆိုရင် တစ်နှစ် လောက် အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ဇာတ်တွေကျတော့လည်း ပရိသတ်ကိုရိုက်ပြချင်တာလေးတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ကိုယ့်ဘာသာတည်ဆောက်ရမယ်။ ဝတ္ထုရှိပြီးသားမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ပြချင်တာတွေကို ကိုယ်တိုင်ချရေးပြီး ဇာတ်လမ်း ဆင်တတ်တဲ့သူကို ဇာတ်ညွှန်းပြန်အပ်ပြီးတော့မှ ရိုက်ရတာဖြစ်တာ ကြောင့် အချိန်တော်တော်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
”လက်ရှိဖြစ်နေတာကို သီချင်းအဖြစ် လုပ်ဆိုတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ကောင်းစား??